Chii chinonzi ECN | Dzidza zvakanakira wechokwadi ECN Forex Broker
Chii chiri ECN
Chii chiri ECN Forex Trading?
ECN, iyo inomirira Electronic Kukurukurirana Network, Chaizvoizvo ndiyo nzira yeramangwana kune Vezvemamwe Masoko Ekuchinja. ECN inogona kunyatsotsanangurwa sebhiriji inobatanidza vatengesi vashoma vemusika nevatambi vayo vakawandisa kuburikidza neFEX ECN Broker.
ECN inoshanda sebhiriji pakati pevatori vechikamu vashoma vemusika nevanovapa mari. Inozivikanwawo sedzimwe nzira dzekutengesa (ATS), ECN Chaizvoizvo inyanzvi yemakomputa inozivisa kutengeserana kwemari uye mumatanda kunze kwekutsinhana kwechinyakare.
Izvo zvine chekuita nekuziva kuti zvese zvekushandurwa zvakaitwa nemaoko emakore asati asvika kuma1970s, paine mwero wakatemerwa we-kutengeserana uripo mumakumi makumi mairi. Panguva iyoyo, dzinenge zvese zvekutengesa zvemagetsi zvaiitwa kuburikidza neyepamberi nzira yekutaurirana yakagadziriswa neReuters, inonzi Reuters Dealing.
Iwo emagetsi emazuva ano ekutengesa masisitimu akatanga kuitika mumavambo ekuma 90s pavakatanga kufananidza vatengi uye vatengesi kuti vazove mutengo wemari bhenji. Hazvireve kuti aya Elektroniki Communications Networks yakanga isipo pakutanga; Muchokwadi varipo kubvira makore ekuma1960s asi havana kushandiswa kutengeserana kwemari kudzamara 90s yapera.
Chekutanga Zvinhu Kutanga - Ziva wako Broker
Musika we Forex uyu unonzi ndiwo mumwe wemisika yakawanda inozivikanwa nevatengesi vadiki. Pano, mabhenefiti anogadzirwa kubva pakunyanyisa kuderera kwemutengo pamari pari. Uye kusiyana nekutengesa kwemasheya kana nhumbi, kutengeserana kunobva kune dzimwe nyika hakuitike pamushandirapamwe wakatemerwa.
Panzvimbo pezvo, zvinoitika pakati pevatengi nevatengesi kubva kunzvimbo dzakasiyana dzepasi rose, kuburikidza nemusika-wekurwisa (OTC) musika. Uye, izvi hazvitauri kuti iwe unofanirwa kushandisa broker kuti uwane soko iri.
Nekuda kwechimiro chayo chakaderedzwa, kusarudza iyo broker chaiyo kunogona kureva mutsauko pakati pekubudirira nekutadza mu yako Forex kutengesa kuedza. Nepo paine vazhinji vatengesi mumusika uchipa zvigadzirwa zvakafanana uye masevhisi, iwe unofanirwa kuziva mhando dzakasiyana dzevatengesi usati watanga Kutengesa kwe Forex.
Zvikurukuru, kune maviri marudzi evatengesi mumusika wekutengesa Forex: Maketi Makuru uye ECN Broker. Sekutsanangurwa kwezita, veMaketi Maketi ndiwo mhando yevatengesi vanoisa mabhaisikopo uye vanobvunza mitengo vachishandisa zvavo masystem nekudaro 'kugadzira musika'. Mitengo yavanosimudzira inoratidzwa pamapuratifomu avo kune vangangoita mainvestment vanogona kuzarura uye kuvhara nzvimbo dzekutengesa.
ECN - Iyo 'Yakachena' Mhando ye Forex Broker Kunze Kunze
Kusiyana neVanoMusika Masiki, iyo Electronic Kukurukurirana Network (ECN) mabhureki haaite mubairo pakupararira mutsauko, asi bhadharisa komisheni panzvimbo zvinzvimbo. Nekuda kweizvozvo, kukunda kwevatengi vavo ndiko kuhwina kwavo pachavo kana zvisina kudaro ivo vaizotadza kuita purofiti.
ECN broker inyanzvi dzemari dzinoshandisa yavo yemagetsi zvigadzirwa zvemagetsi kubatanidza vatengi vavo nevamwe vatengi vepamusika. Kubatanidza makotesheni kubva kune vatori vechikamu vakasiyana, maECN broker vanokwanisa kupa vatambi vakasimba / kubvunza vapararira.
Kunze kwekushandira masangano makuru emari uye vatengesi vemusika, ECN broker vanobatirawo vatengi vevatengesi vekutengesa. MaECN anogonesa vatengi vavo kutengeserana vachipokana nekutumira mabhesi uye zvinopihwa papuratifomu.
Imwe yezvinonakidza zve ECN ndeyekuti vese vatengi uye vatengesi vanoramba vasingazivikanwe mumishumo yekutengesa kwekutengesa. Kutengesa paECNs kwakanyanya kufanana nekushandurwa kwehupenyu kunopa iyo yakanyanya dhidhi yekubvunza / kubvunza mitengo kubva kune yose mari mareti.
Kuburikidza neECNs, vatengesi vanowana zviri nani mitengo uye yakachipa yekutengesa mamiriro sean ECN bhuroka inokwanisa kubvumira mitengo kubva kune vakasiyana fluidity vanopa. Uyezve, nzvimbo yekutengeserana yakapihwa neECN broker inoshanda zvakanyanya uye iri pachena, ichiwedzera kuwedzera kukwezva kwe e-kutengeserana.
Iyo ECN Inobatsira - Nei Uchifanira Kutengesa NeECN Broker
Uchishandisa an ECN bhuroka ine zvakanaka zvakati; Muchokwadi, nhamba huru yevatengesi vari kutarisira ECN broker, uye nechikonzero chinogona kuitika. ECN broker vanopa akawanda mabhenefiti akakosha, ayo anogona kuvabatsira kusvika pamberi pevanotungamira vamwe vavo. Heano mamwe makuru akakosha ekushandisa ECN broker.
Kusazivikanwa, Kuvanzika, uye Kuchengetedzeka
Iwe unowanzove riri bhuku rakavhurika kana uchiita nezvesekuita Forex kutengesa. Zvakangodaro, kuvanzika uye kuvanzika kunofunga kwakanyanya kukosha paunosarudza kuenda pasi peiyo nzira yeECN broker. Iyo yakakwira mwero wekuvanzika uye kuvanzika zvechokwadi ine chekuita nenyaya yekuti broker yaingoshanda senge middleman mumusika pachinzvimbo chemusika anogadzira.
Vatengesi vanopihwa mukana wekukanganisa kumisika yemitengo kuburikidza neECN mumiririri uye yakazvitsaurira account. Sezvo mitengo yacho ichisiyana pakuburitswa, kudiwa, kusagadzikana, uye dzimwe nzvimbo dzemusika, kuburikidza neiyo chaiyo ECN broker, munhu anogona kutengesa pamabhawa akanyanya / donho rinopararira.
Kukurumidza Kutengeswa Kuuraya
Ichi chinhu chinhu icho Forex vatengesi kazhinji havakwanisi kuita zvimisikidzo pazviri. ECN broker inovimbisa kuti zvinobudirira kutengeserana kuita kwakawanda kwakanyanya pane kumwe kuenda. Iyi nzira yakatarwa yekutengesa haidi kuti mutengi atengesere neye broker, asi pachinzvimbo anoshandisa network yake kuisa mirairo. Iyi nzira yakasiyana inonyatsoita kuti chero munhu afarire kunatsiridza kutengeswa kuuraya.
Kuwana kune Vatengi uye Liquidity
ECN vamiririri vanoshanda pane modhi inobvumira chero uye mukana wese wekutengeserana mukati mekunze kwepamhepo yedziva remvura yezviripo, zvinodzora, uye nehunyanzvi emari masangano. Uyezve, nekuda kweruzivo rwunobatana sei rwunotapurwa, kubuda pachena chiri chimwezve chibatsiro chakakosha cheECN broker. Vese maECN vamiririri vanopihwa mvumo yekuwana iyo musika data uye kutengeserana; saka, pachena pachena yemitengo yakakosha yemusika kubva kune vakawanda vakadzimisi vanopa mari kuvimbiswa.
Imwe yemabhenefiti akakosha eECN broker uye yakabatana Forex yekutengesa account ndeyekutengeserana kusimba. Tichifunga nezve mhando yekutengeserana kwe Forex, kuzorora haina kukosha, uye haina kumboitika pakati pekutengesa. Paunotora mukana weECN broker, iwe unogona zvirokwazvo kutengeserana panguva yezviitiko uye nhau, pamwe nekuve kungangokwanisa kuumba chaiyo yekuyerera kwechiitiko. Izvi zvakare zvinogadzira mukana kune chero mutengesi kuti abatsirwe kubva Forex mutengo kusimba.
Ndezvipi zvinonzi FXCC-ECN?
Basa reE ECN harina kuzivikanwa, izvi zvinobvumira vatengesi kuti vashandise mari dzisina kutakura, kuve nechokwadi chokuti misika chaiyo yepamusi inoratidzwa panguva dzose. Hapana hutano hunopesana nehutungamiri hwomutengi hunobva pane: mazano ekutengeserana forex, maitiro, kana ikozvino misika.
Nenguva yekushandiswa kwekutengesa
FXCC-ECN vatengesi vanogona kutengesa forex pakarepo, kushandisa zvakanakisisa kurarama, kutumbuka, zvakanakisisa zvinotengeswa pamusika, nechisimbiso chaipo. Nzira yeFXCC-ECN inodzivisa kupesana kwevanoita mutengo, naizvozvo mabasa ose eFXCC ari ekupedzisira uye anosimbiswa pakarepo pavanenge vachiitwa uye vachizadzwa. Hapana hofisi yekubatsira kupindira, hapasati yambokodzokorora zvakare.
Mutevedzeri, kuwanikwa kwemari
FXCC ECN muenzaniso inopa vatengi mukana wekutengeserana mudzimba wepasi rose inotengeswa yepamutemo, yakakosha uye ine makwikwi emari.
Automated forex trading / market data feed
Kuburikidza nekushandiswa kweFXCC's API, vatengi vanogona nyore kushamwaridzana maitiro avo ekutengeserana, vadzidzisi vadzidzisi, maitiro uye maitiro ekugadzirisa matambudziko kumararamiro ehupenyu anowedzera kudyidzana uye injini inofanana nejini. FXCC inorarama, isina kutora, iyo inotengeswa yemari yematare inosanganisira iyo yakakwikwidzana yakakwikwidza uye inokumbira mitengo inowanikwa chero nguva ipi zvayo mumusika. Sezvo mugumisiro wekutengesa unoramba wakatendeseka uye unogadzikana apo kana shure kwekuedza kuendesa mabhizimisi, kana kuti kutengesa kurarama.
FXCC inopesana nemutengesi kana mutengesi sezvo FXCC isingatungamiri bhidhiyo / kupa zvakapararira saka saka hatigone kupa bhidhiyo / kugoverana kwakapararira nguva dzose. FXCC inopa kushanduka kwechokwadi kupararira.
PaECN, vatengi vanonyatsogona kusvika pamusika. Mitengo yemashamba inofananidzwa ichiratidzira kugovera, kuda, kusagadzikana uye mamwe mamiriro emisika. Muenzaniso weFXCC-ECN unobatsira vatengi kuti vashandise zvakasimba bid bid / offer spreads, iyo inogona kuva yakaderera pane imwe pipi pane mamwe makuru mune dzimwe mamiriro emisika.